Ahoana ny fananganana Siri Remote | Vaovao IPhone
Ny knob fanaraha-maso Apple TV an'ny taranaka fahefatra dia mitondra endri-javatra betsaka noho ny teo alohany. Trackpad iray hamakivakiana ireo menus na hisafidianana safidy, ny fahaizana mifehy ny habetsaky ny herinao amin'ny fahitalavitra, mikrô ho an'i Siri, sns. Izahay dia mamakafaka amin'ny horonan-tsary hoe inona ireo safidy fanamboarana atolotry ny Siri Remote vaovao sy ny fomba ahafahantsika mamerina azy io ary mampifangaro azy indray amin'ny Apple TV.
Ny fanaraha-maso Siri Remote dia tsy ahafahantsika mivezivezy amin'ny menus an'ny Apple TV vaovao, fa izy io koa dia mpanara-maso ny lalao video. Ny gyroscope sy ny haingam-pandeha dia mety amin'ny filalaovana lalao na lalao ara-panatanjahan-tena toy ny Beat Sports, satria manahaka tanteraka ny asan'ny mpanara-maso Nintendo Wii. Ny trackpad-ny koa dia ampiasaina hifehezana lalao sasany, ankoatry ny fitetezana menus, fanoratana amin'ny alàlan'ny fitendry an-tserasera sns. Ny fametrahana ny fahatsapana ny trackpad dia tena ilaina raha heverinao fa haingana na miadana loatra ny fihetsiketsehan'ny kôktera. Ny tvOS dia mamela antsika hisafidy ny ambaratonga telo amin'ny fahatsapana fahatsapana, ny safidy eo anelanelany dia ilay nofidin'ny default.
Afaka manampy fanaraha-maso vaovao vaovao azo atao ihany koa ny mamela antsika hilalao lalao marobe izay mamela ny multiplayer ataon'ny olona maro. Zava-dehibe ihany koa ny fahafantarana ny fomba hamerenan'ny Remote control raha sanatria ka diso ny asany na te hanampy fotsiny remote vaovao novidianay izahay, na mampiasa azy amin'ny Apple TV hafa noho ilay mahazatra. Ary farany miresaka momba ny asan'ny Siri Remote ihany koa izahay hifehezana ny habetsaky ny fahitalavitra sy ny fidirana amin'ny fahitalavitra, hahafahantsika mandao ny lavitra azy ary mifehy ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny Apple TV lavitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fananganana ny Siri Remote
Afaka mifandray amin'ny iPhone 6 ve ny Siri Remote hampiasaina amin'ny iOS Keynote?
Tsy amin'izao fotoana izao
Misaotra betsaka anao Luis
WeatherBoard dia nohavaozina amin'ny kinova faharoa ho an'ny iOS 9 sy iPad [Video]